गर्लफ्रेण्ड राखिन् यस्तो माग, माग पूरा गर्दा प्रहरीको खोरमा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गर्लफ्रेण्ड राखिन् यस्तो माग, माग पूरा गर्दा प्रहरीको खोरमा
एजेन्सी । दिल्ली प्रहरीले एक यस्तो अपराधीलाई पक्राउ गरेको छ जसको बारेमा थाहा हुँदा प्रहरी नै चकित परेको छ । समाचारअुसार सो आरोपीले गर्लफ्रेण्डको माग पुरा गर्न गाडी चोर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
सो आरोपीले पहिला कतै जानका लागि गाडी बुक गर्ने र त्यसपछि बाटोमा पुगेपछि लुट्ने गरेको बताइएको छ ।
यो घटा दिल्लीको कापसहेडा थाना क्षेत्रको हो । सो व्यक्तिले गुरुग्राम जानका लागि गाडी बुक गर्यो तर बाटोमा चक्कु देखाएर गाडी लुट्यो । सो गाडीका ड्राइभरले प्रहरीमा मुद्दा गरेपछि आरोपीलाई प्रहरीले केही घण्टामै पक्राउ ग्रयो ।
प्रहरीले पक्राउ गरेका ती व्यक्तिको नाम रोहित रहेको बताइएको छ । उसको अपराध कथा निकै लामो रहेकोसमेत समाचारमा जनाइएको छ । खासगरी दिल्लीको उत्तम नगर र आसपासका क्षेत्रमा रोहित नामुद लुटेराका रुपमा परिचित थियो ।
उसले गाडी लुट्नेमात्र होइन केटीलाई जिस्क्याउनेसमेत गरेको उजुरहरु प्रहरीमा पुगेका थिए । राम्रो परिवारको भए पनि रोहितले आफ्नी प्रेमिकाको माग पुरा गर्न गाडी लुट्ने गरेको बताइएको छ ।
प्रहरीले रोहितसहित एक अर्को व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेको छ । अर्को व्यक्ति भने पहिलो पटककै लुटाईमै प्रहरीको फेला पर्यो ।
रोहितको गिरफ्तारीपछि प्रहरीलाई पनि आराम भएको बताइएको छ । किनभने रोहित पक्राउ नपर्दा उसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु दिनहुँ आउने गरेका थिए ।